Thames Town, sombin'ny Angleterre taloha any Shina | Vaovao momba ny dia
Thames Town, sombin'i Angletera taloha any Chine
Mariela Carril | | Shanghai, Tsangatsangana
Eoropeana taloha dia mbola manana pesona ary satria ny kolontsaina mivezivezy amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao dia manondro azy io na amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, manintona ireo mpitsidika eran'izao tontolo izao. Amin'ny tanàna eropeana rehetra dia mahita mpizahatany amerikana, afrikanina na aziatika isika.
Samy te hahalala ny araben'i Paris, ny tranombakoka ao Madrid na ny trano fisotroana anglisy ao Angletera. Be loatra izany eAny amin'ny firenena sasany, dia nisy ny fanandramana natao hamoronana ilay hatsarana eropeana efa an-taonany maro. Ity no tranga misy an'i Shanghai izay hitantsika Thames Town.
2 Tanàna matoatoa ao amin'ny tanànan'i Thames
Voalohany dia mila milaza an'izany ianao Shanghai dia iray amin'ireo tanàna cosmopolitan sy iraisam-pirenena indrindra ao Shina. Efa nisy hatrizay fa tsy vaovao. Izy io koa dia iray amin'ireo tanàna misy mponina betsaka indrindra manerantany, manodidina ny 24 tapitrisa ny olona.
Tanàna natokana ho an'ny varotra an-dranomasina hatrizay izy io, asa lehibe foana no natao teto ary hatramin'ny nifandraisan'i Azia tamin'ny Eoropeana mpivarotra britanika sy ny firenen-kafa taloha dia nanorim-ponenana teny an-dalambe.
Thames Town dia ampahany vaovao ao amin'ny distrikan'i Songjian, sahabo ho 30 kilometatra miala ny tanànan'ny Shanghai. Ity distrika ity faritra amoron-tsiraka io, millenary, izay heverina ho foiben'ny kolotsaina isam-paritra.
Songjiang sy afovoan-tanànan'i Shanghai dia mifamatotra amin'ny làlan'ny metro, 9. Ny zavatra vaovao indrindra eto dia ity distrika fonenana nomen'ny renirano Thames. Araka ny asehon'ny anarany eropeana ny maritrano ary toa mandeha mamaky faritra manodidina an'i Londres ianao.
Thames Town dia efatra kilometatra ny halavany ary tany am-boalohany ny tanjon'ny famolavolana sy ny fananganana azy dia ny handraisana ireo mponina ao amin'ny Tanànan'ny Oniversite Sonjiang eo akaiky eo mamindra olona avy ao afovoan-tanànan'i Shanghai. Izy io dia ampahany amin'ny tetikasa lehibe kokoa izay nahitana ny fananganana tanàna vaovao sivy, izay tamin'ny fomba somary "manana lohahevitra" amin'ny fomba tandrefana.
Noho izany, ny tetik'asa dia nahitana tanàn-dehibe Alemanina, Holandey iray hafa, Espaniôla iray hafa, Kanadiana iray hafa, Italiana ary Skandinavianina iray. Ny orinasa ao ambadiky ny drafitra dia Atkins ary ny voalohany nahita ny jiro dia ny Thames Town. Vita tamin'ny 2006 ny asa.
Ny tanànan'i Thames dia manana velarana iray kilometatra toradroa ary Natao honenana olona 10 izy io. Tanànan'ny fianakaviana izy io, misy fivarotana vitsivitsy, ampy hamatsy olona fa tsy misy zavatra hafa, ary manana tanjona ny tsy hameno olona.
Nivarotra haingana be ireo trano sy tranony Vidiny lafo fa ny maro an'isa dia amidy ho "trano faharoa" ka ny vokatr'izany dia ny fiakaran'ny vidim-piainana sy izany tsy hisy olona hipetraka eo. Tanàna matoatoa.
Tanàna matoatoa ao amin'ny tanànan'i Thames
Angamba tsy noheverin'ny manampahefana Shanghai fa ho toy izany no ho anjaran'ilay tanàna vaovao. Niakatra be ny vidiny noho ny varotra haingana izay farany tsy nisy fianakaviana tsotra afaka nividy tao ary navela foana ireo trano sy trano.
Miaraka amin'ny tompony, fa foana. Androany isika dia afaka mandray ny zotra metro 9 ary hahafantatra ity faritra tsy misy olona ity nefa miaraka amin'izay dia mahafinaritra be. Ny ankamaroan'ny tranobeny dia nalaina tahaka avy amin'ny araben'i Londres ary avy amin'ny tanàna anglisy hafa.
Làlana misy sakana, tranobe eropeana, vato, biriky ary tsy volon'ny firafitra sinoa. Ny vokany dia maro amin'ireo boky fakana sary amin'ny fampakaram-bady no manana azy io ho toerana tianao indrindra. Toa tsy mampino nefa dimy ambin'ny folo na 20 taona lasa izay dia ahitra sy fambolena ary omby fotsiny.
Androany dia misy kianja misy a Sarivongana Winston Churchill, ny praiminisitra anglisy tamin'ny ady lehibe faharoa, trano fisotroana, trano hazo Tudor ary toerana medieval hafa. Ny tena marina dia mahafinaritra ... toy ny valan-javaboary fialamboly.
Iza no maniry hipetraka eto? Eny, angamba tsy dia manintona antsika izy io, fa rehefa tsy manam-bola hisamborana fiaramanidina ianao ary handehanana mandritra ny 16 ora mankany Eropa, avy any Chine, dia eo an-joron-trano ity ary mety hahafinaritra.
Ankoatra ny fankasitrahana manokanas misy maro ny mpanao mari-trano izay mihevitra fa tsy dia vita tsara izany- Diso ny fizarana, nampiasaina tamin'ny fomba ratsy ny karazana vato, ary tsy mifanaraka ny fomba. Pastiche io.
Azo lazaina fa mihoatra ny vahoaka anglisy vahoaka azon'ny Sinoa amin'ny anglisy. Mazava ho azy fa tsy miraharaha ireo Sinoa. Vitsy no monina eto, na dia nilaza aza izy ireo fa velona tsimoramora io ary ireo olona manana ny tranony dia manomboka mahatsapa ho anisan'ny vondrom-piarahamonina iray.
Ny sisa amin'ny tonga mitsidika ny olona: maka sary, manao fitsangantsanganana eny amin'ny kianjan'ireo foana, mandeha ary manonofy fa any Angletera izy ireo, na dia vetivety aza. Tsy haiko raha hipetraka eto aho fa raha akaiky azy aho dia handeha hitsangatsangana, sa tsy izany?
Ny tiana holazaina dia hoe tsy vaovao ny ataon'ny sinoa. Etazonia, zato taona teo ho eo izay, dia niaina ilay manaova mitovy ary raha manao fikarohana kely ianao dia mahita "tanàna kopia" erak'izao tontolo izao. Ny sinoa no farany niditra tamin'ny fironana, izay ihany.
Tamin'ny taon-dasa dia nanangana kopian'ny tanàna Australiana tsara tarehy indrindra amin'izy ireo izy ireo, Hallstatt, tranokala iray lova manerantany. Tian'izy ireo izany, heverinay fa antsipirian'ny kistch io. Ary ny sasany amintsika dia tia fa tian'izy ireo izany.
Ny marina dia ity programa ity, "Tanàna iray, tanàna sivy" noresahintsika tetsy ambony, dia tsy hevitra ratsy. Ny famongorana megalopolis toa an'i Shanghai dia zavatra mbola ilaina ihany, na dia ianao azaTetikasa toa izao toa tsy azon'ny olon-tsotra atao mora idirana iza no te hiala amin'ny be loatra ao an-tanàna.
Misokatra ho an'izao tontolo izao i Shina ary hitan'ny sinoa izany tontolo izany ary tena tian'izy ireo izany ka tsy vitan'ny lamaody sy fomba amam-panao ihany no narahin'izy ireo fa koa ny maritrano. Ny ankamaroan'ny nouveau riche any Shina dia miafara amin'ny fananganana tranobe miendrika Beverly Hills, ohatra, ary tsy mahatsiaro ho mahamenatra na dia kely aza izy ireo rehefa maka tahaka.
Izay raha ny hevitro! Mandritra ity faritra eto amin'izao tontolo izao ity dia tsy ekena ny kopia amin'ny kolotsaina sinoa milamina ny zava-drehetra. Maka tahaka ny kitapom-batsy, baoty Hunter roa, finday na tranobe iray izy ireo. Inona no olana?
Azo antoka fa misy maritrano maritrano sinoa izay tsy manaiky an'io "copie mania" io, aorian'ny fahagola ara-kolontsaina rehetra any Sina dia efa antitra hanaovana an'io ... fa ny lamaody dia lamaody. Izay mahatakatra izany dia ampahafantaro azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Shanghai » Thames Town, sombin'i Angletera taloha any Chine
Toerana fahavaratra tsara indrindra any Wales
Ranomasin'izao tontolo izao